ယှဉ်ပြိုင်မှု ပုံစံသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲကျင်းပသွားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲက ဘယ်လိုမျိုးလဲ - Sports Home Time
ယှဉ်ပြိုင်မှု ပုံစံသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲကျင်းပသွားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲက ဘယ်လိုမျိုးလဲ
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ စတင်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ပုံစံသစ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာအတွက် ရှင်းပြမှု ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘယ်နှစ်သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၂ သင်း ယှဉ်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပေမယ့် ပုံစံသစ်မှာတော့ ၃၆ သင်း ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် ပုံစံသစ်ကို ဘယ်အချိန်မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ?
ပုံစံသစ်ဖြင့် စတင်ကျင်းပမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဟာ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြုလုပ်ထားလဲ?
ပြိုင်ပွဲဝင်ကလပ် ၃၂ သင်းကနေ ၃၆ သင်းထိ တိုးမြင့်ခြင်း အပါအဝင် အကြီးမားဆုံး အပြောင်းအလဲကတော့ အုပ်စုအဆင့် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုအဆင့်ကို ထပ်တိုးကလပ်တွေ ပါဝင်တဲ့ လိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပုံစံ ပြောင်းလဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတွေကို အင်္ဂါနေ့နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနက်ပွဲတွေအပြင် ကြာသပတေးနေ့မှာလည်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကလပ်တိုင်းဟာ ယခင်တုန်းကလို အုပ်စုအဆင့်မှာ ပြိုင်ဘက် ၃ သင်းဖြင့် အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်းပွဲ ၆ ပွဲ ကစားရမယ့်အစား မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အတူ အိမ်ကွင်း ၅ ပွဲ အဝေးကွင်း ၅ ပွဲအဖြစ် မတူညီတဲ့ ပြိုင်ဘက် ၁၀ သင်းကို ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။
ထိပ်ဆုံး ၈ သင်းဟာ ရံှူးထွက်အဆင့်ကို အလိုအလျောက် တက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး အဆင့် ၉ ကနေ အဆင့် ၂၄ အထိ အသင်းတွေကတော့ နှစ်ကျော့စနစ် ကစားကာ အနိုင်ရအသင်း ၈ သင်းက ၁၆ သင်းအဆင့် ရံှူးထွက်ကို တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။
ယူရိုပါလိဂ်မှာလည်း အုပ်စုအဆင့်မှာ ၈ ပွဲ ကစားရမှာဖြစ်ကာ တတိယမြောက် ဥရောပပြိုင်ပွဲ Europa Conference ကတော့ ၂၀၂၁ မှာ စတင်မှာဖြစ်ပြီး အုပ်စုအဆင့် ၆ ပွပုံစံဖြင့် ကစားရပါမယ်။ ယူရိုပါလိဂ်နဲ့ Europa Conference ကလည်း ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ကလပ် ၃၆ သင်းထိ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ပုံစံကတော့ ယခင်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပြီး အစဉ်အလာအတိုင်း ကြားရက်မှာပဲ ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ထပ်တိုး ၄ သင်းကို ဘယ်လိုပုံစံ ဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်း အောက်မှာ ယှဉ်းပြထားပါတယ်။
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘောလုံးရာသီကစလို ထပ်တိုးဝင်ခွင့်ပေးမယ့် ကလပ် (၄) သင်း
ယူအီးအက်ဖ်အေ နိုင်ငံအဆင့် ရပ်တည်ချက်ရဲ့ အဆင့် ၅ နေရာမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ အဆင့် ၃ နေရာ ရပ်တည်တဲ့အသင်း
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ဖို့ သက်မှတ်ချက် မမှီခြင်းကြောင့် ခြေစစ်ပွဲကနေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး တစ်နေရာစာလုရာမှာ ထိပ်ဆုံးရတဲ့အသင်း
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ဝင်ဖို့ အရည်အချင်း မမှီပေမယ့် ကုန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်မှာ ယူအီးအက်ဖ်အေ အဆင့်သက်မှတ်ချက် အမြင့်ဆုံး ကလပ် (၂) သင်း
ZAWGYI – ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္မယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲ ပံုစံသစ္က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ဆိုတာအတြက္ ရွင္းျပမႈ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဘယ္ႏွစ္သင္း ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာလဲ?
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၃၂ သင္း ယွဥ္ျပိဳင္ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ ပံုစံသစ္မွာေတာ့ ၃၆ သင္း ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပံုစံသစ္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္ ယွဥ္ျပိဳင္မွာလဲ?
ပံုစံသစ္ျဖင့္ စတင္က်င္းပမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲဟာ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ထားလဲ?
ျပိဳင္ပြဲဝင္ကလပ္ ၃၂ သင္းကေန ၃၆ သင္းထိ တိုးျမင့္ျခင္း အပါအဝင္ အၾကီးမားဆံုး အေျပာင္းအလဲကေတာ့ အုပ္စုအဆင့္ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုအဆင့္ကို ထပ္တိုးကလပ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ လိဂ္ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုပံုစံ ေျပာင္းလဲက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပြဲေတြကို အဂၤါေန႔နဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညနက္ပြဲေတြအျပင္ ၾကာသပေတးေန႔မွာလည္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ကလပ္တိုင္းဟာ ယခင္တုန္းကလို အုပ္စုအဆင့္မွာ ျပိဳင္ဘက္ ၃ သင္းျဖင့္ အိမ္ကြင္း အေဝးကြင္းပြဲ ၆ ပြဲ ကစားရမယ့္အစား မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈနဲ႔အတူ အိမ္ကြင္း ၅ ပြဲ အေဝးကြင္း ၅ ပြဲအျဖစ္ မတူညီတဲ့ ျပိဳင္ဘက္ ၁၀ သင္းကို ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္တယ္။
ထိပ္ဆံုး ၈ သင္းဟာ ရံွဴးထြက္အဆင့္ကို အလိုအေလ်ာက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမွာျဖစ္ျပီး အဆင့္ ၉ ကေန အဆင့္ ၂၄ အထိ အသင္းေတြကေတာ့ ႏွစ္ေက်ာ့စနစ္ ကစားကာ အႏုိင္ရအသင္း ၈ သင္းက ၁၆ သင္းအဆင့္ ရံွဴးထြက္ကို တက္ေရာက္မွာျဖစ္တယ္။
ယူရိုပါလိဂ္မွာလည္း အုပ္စုအဆင့္မွာ ၈ ပြဲ ကစားရမွာျဖစ္ကာ တတိယေျမာက္ ဥေရာပျပိဳင္ပြဲ Europa Conference ကေတာ့ ၂၀၂၁ မွာ စတင္မွာျဖစ္ျပီး အုပ္စုအဆင့္ ၆ ပြပံုစံျဖင့္ ကစားရပါမယ္။ ယူရိုပါလိဂ္နဲ႔ Europa Conference ကလည္း ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ ကလပ္ ၃၆ သင္းထိ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ဝင္ခြင့္ ပံုစံကေတာ့ ယခင္ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ျပီး အစဥ္အလာအတိုင္း ၾကားရက္မွာပဲ ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္တယ္။ ထပ္တိုး ၄ သင္းကို ဘယ္လိုပံုစံ ဝင္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေအာက္မွာ ယွဥ္းျပထားပါတယ္။
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ေဘာလံုးရာသီကစလို ထပ္တိုးဝင္ခြင့္ေပးမယ့္ ကလပ္ (၄) သင္း
ယူအီးအက္ဖ္ေအ ႏုိင္ငံအဆင့္ ရပ္တည္ခ်က္ရဲ႕ အဆင့္ ၅ ေနရာမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းလိဂ္မွာ အဆင့္ ၃ ေနရာ ရပ္တည္တဲ့အသင္း
ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ကို တိုက္ရိုက္ဝင္ဖို႔ သက္မွတ္ခ်က္ မမွီျခင္းေၾကာင့္ ေျခစစ္ပြဲကေန ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကျပီး တစ္ေနရာစာလုရာမွာ ထိပ္ဆံုးရတဲ့အသင္း
ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ဝင္ဖို႔ အရည္အခ်င္း မမွီေပမယ့္ ကုန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္မွာ ယူအီးအက္ဖ္ေအ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ အျမင့္ဆံုး ကလပ္ (၂) သင္း
အသင်းဟောင်း ချယ်ဆီးဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်ပွဲမှာ ဟာဇက် ပါဝင်နိုင်ချေအား ဇီဒန်း အဖြေပေး
ဆဲလ်တစ်နဲ့ ရိန်းဂျားကို ပရီးမီးယားလိဂ်ထံ ပေါင်းထည့်ပြီး ဗြိတိန်စူပါလိဂ် စတင်ဖို့ အစီအစဉ်